Kusarura kwakanaka kune software yemahara | Linux Vakapindwa muropa
Kusarura kwakanaka kune software yemahara
edumix | | Free Software
Aingova mazuva mashoma apfuura, asi pakati pehurukuro nezve bhajeti renyika muChile, seneta Alexander navarro (Independent vekare-PS) vakakurudzira chinongedzo kubhajeti bhiri iyo inotikwevera kutarisa kwedu kune vese
“Chitaurwa chemidziyo yemakomputa inosanganisira mutengo wemarezinesi chinofanira kuratidza imwe chete sarudzo ine software yakapihwa marezenisi pasi peiyo yakavhurwa sosi kana isina mutengo wemutengo.
Izvo hazvigoneke kutora marezinesi mukutenga kwemidziyo yemakomputa uye marezinesi esoftware anodikanwa anofanirwa kutorwa zvakasiyana, uye mutengo wawo unofanirwa kuperekedzwa nekururamisa kwakakosha kana paine sosi yakavhurika kana software yemahara iyo inoita zvakafanana shanda ”.
¿Iwe unoverenga zvakanaka? Kana zvisiri, verenga zvakare nekuti ndicho chinhu chakanyanya kukosha muchinyorwa chino.
Kana chiratidzo ichi chikatenderwa, zvaizobvumidza yemahara software kuti ive nemukana mune angangoita ese masangano, izvo zvine musoro tichifunga kuti marezinesi esoftware anomiririra mubhadharo wakakura kune chero Nyika, nokudaro, kana ichifanirwa kushandiswa mune chero rezinesi, ita pachena kuti pakanga pasina imwe sarudzo iri nani.
Somuenzaniso, kana Raibhurari inoda maPC mazhinjiKuti unyorore kutenga, panofanirwa kuve nesarudzo umo muchina usingauyi wakasungirwa kune anoshanda system, panofanirwa kuve nesarudzo neGNU / Linux kana chero imwe sisitimu yakafanana maererano nerusununguko rwekushandisa (ine FreeDOS semuenzaniso). Kana Raibhurari pachayo yaida kutora marezinesi, semuenzaniso, kuronga kuunganidzwa kwayo, inofanira zvakare kupa nharo (inogutsa hazvo) yekusave wakashandisa mahara software.
Don Esteban, sei wakashandisa 3D Max uye kwete Blender? Iwe zvirinani undipe chikonzero chakanaka kana kuti uchaenda kujeri kwekubiridzira mari yeruzhinji!
Zvinondiyeuchidza nezve pfungwa ye «rusarura»Sezvo, kunyangwe kune rimwe divi rakagadzirirwa kuchengetedza homwe yepfuma, asi zvinokwanisika kuchengetedza vanogadzira nyika, avo vane mutemo wakadai vangave nezvivakwa zvakakura zvekugadzira software yakanyatsogadzirirwa zviitiko zvemuno.
Sezvaunofungidzira, hazvina kutora nguva kuti mhinduro yemasimba makuru ezvehupfumi eindasitiri yesoftware asvike, ichida kuti chiratidzo chisatenderwe mune inotevera chiitiko, vachipokana kuti izvi zvinokuvadza maSoft software emuno anorarama marezinesi avanotengesa. uye, pane kumwe kupomerwa kudiki: Izvo zvinotyora iyo kusarerekera kwetekinoroji pakati pezvimwe zvinhu.
Izvo Navarro yakaronga (zvinofanirwa kutaurwa, pasina budiriro huru panguva ino) muChile, hachisi chinhu chitsva hongu, asi chinotipa mukana wekupokana nazvo, kutaura nezvazvo. Nharo pamativi ese ari maviri dzinonzwisisika.
Kunyangwe iyo software indasitiri ichiita senge yakasungirirwa munguva yakapfuura nekutya kukuru kwakadai kuti yemahara software ndiyo yekutanga sarudzo, ichiri nharo yakanaka pachinzvimbo chayo kuti inogona kunge iri kutyora kusarerekera kwetekinoroji iyo nyika yese yakanaka inofanirwa kudzivirira kana yakakodzera. Asi hurumende zhinji dzakarasikirwa nekwavo kwazvakarerekera tekinoroji, kwete nekuda kwemutemo asi nekuda kwekumanikidza kana nekuda kwehuori. MuChile chaizvo izvo zvakaitika rinenge gore rapfuura, pakanga paine «Anotyisa Lobby“Ini handizive kana huwori, asi fungidzira kwayakabva: ndeipi imwe kambani kunze kweMicrosoft.
Kunyangwe izvozvo zvisingareve kuti kusarerekera kwetekinoroji kunogona (pakupedzisira) kukanganiswa, hazvina hunhu kuti indasitiri yesoftware, iyo ACTI (Chilean Association yeRuzivo Technology Makambani), imwecheteyo inodzivirira kodzero dzeMicrosoft uyo anotaura nezve kusarerekera. Kune vamwe vese, kumisikidzwa kwepamutemo hakutadzise makambani aya kushandura software yemahara kuti asimbe muhondo "yakavhurika" nyowani kana kuzvidzivirira nekupa zvikonzero zvakanaka (zvinoenderana nezvirongwa zvirinani) kuti varambe vachibhadhara marezinesi avo.
Ndakafarira kutanga kwaSenator Navarro, kunyangwe ichinyara, kubvira inotarisa kwese kufarira kwayo pakuita iyo Nyika kuti itore software pamutengo wezero, Pasina kupa kukosha (zvirinani mundima idzi ndidzo chete dzandakatarisa) dzakakura pane kuve nekodhi kodhi, izvo zvinobatsira zvakanyanya kana software isingaenderane nezvandinoda.
Zvinhu zviri sei munyika mako? Iko mukana unogamuchirwa yemahara software?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Kusarura kwakanaka kune software yemahara
MuVenezuela isu tinofanirwa kunge tichidarika izvo: p
Makore mashoma apfuura, purezidhendi akapa chirevo chekuti masangano ese ehurumende aisungirwa kushandisa mahara software, uye kuti vaine gore rimwe kana maviri, handirangarire, kuita shanduko yakazara. Ehe ... Ndinoona kuti raibhurari yeruzhinji yepedyo (inotarisira Hurumende yeNyika yangu) ine XP yakachena.
Saizvozvowo, Yunivhesiti yangu (yeruzhinji, inotarisira Hurumende) inofanirwa kushandisa yemahara software yemakirasi ayo asi hapana ... yakachena XP (uye kuhwina 98 kana 2000 murabhoritari yakaisirwa matlab, mandiri mune kirasi muawa: p)
Chinhu chinosuruvarisa ndechekuti ini ndanga ndatonzwa nezvevadzidzisi vazhinji vanoshandisa gnu / linux! 3 vadzidzisi ve thermodynamics uye vadzidzisi vemidziyo yekudyara vanoishandisa
Imwe nyaya, inova ndiyo yandinoda zvakanyanya, ndeye yangu otomatiki ekudzora maticha, akabvunza kana isu tese tanga tine matlab ndikamuudza kuti ndiri kutsvaga matlab yakaenzana nelinux, saka vandaidzidza navo vakati «oh mudzidzisi , Ruregerero mukomana uyu, anogara aine chirwere che linux uye haashandise windows nekuti haashandise chero chinhu chinobata ... "iyo inopindurwa nemudzidzisi wangu" zvakanaka, ndiri kuzokuudza chimwe chinhu, ndinonzwisisa. .. Ini handishandisi matlab futi nekuti ndeyeZVOZVO! (fungidzira kunyemwerera kwangu: D) asi scilab nekuti YEMAHARA uye saka handifanire kunetseka nezve rezinesi, kurimutsiridza uye nezvimwe, uye izvo zvakakosha kana ukaita mabasa mazhinji anoida, haugone kutaura wakazviita neimwe rezenisi rekupamba ... »
Pindura kune kernel_panic
Zvingave zvakanaka !!!!! Asi ini ndinofunga kuti muChile tichine zvakawanda zvasara. Ini ndinoshanda mune yekutanga hutano sevhisi uye, zviripachena, ivo vanongoshanda chete nema windows mune akati wandei ayo mavhezheni. Kubva paw95 kuenda kuXP nekuti ese murwere manejimendi software yakagadzirirwa aya mapuratifomu.
Ini handifungidzire kuti chii chingaitika kana mumwe munhu akadzora marezinesi emakomputa, nekuti ndine chokwadi chekuti ruzhinji rune pirated windows.
Ini ndinofunga shanduko ichave yakaoma kwazvo, pane kushomeka kwezvinhu zvakakosha kuti uchinje kubata kweiyo tekinoroji yeruzivo mumabasa eruzhinji. Kune vamwe vachiri mubasa rangu vanonetseka kuti ndinoita BASA RANGU ROSE naUbuntu, uye havagone kufungidzira kuti gwaro rakareruka kana mushumo unogona kunyorwa muOO. Zvinotaridza kuti zviyero hazvina kuvakwa chete pakati pemabhizimusi, sezvo zvakadzika midzi mutsika.
Pindura kuna Cesar
ichiri kutanga kwakanaka. Ini ndinofunga zvakakosha kuti uzive kuti hapana munhu anogona kuvimba nekambani inoita zvavanoda pavanenge vachida. Ichokwadi kuti kune nzira refu yekufamba, asi kutora nhanho yekutanga munhu anodzidza zvakawanda. Uye izvo zvine basa
Mhoro munhu wese, nekuti muChiclayo, Peru mwedzi mishoma yapfuura software yemahara yakatanga kushandiswa muhurumende yemasipala nemahofisi ayo ese, nenzira iyi handizive kana vakamanikidza vese vashandi kana kwete asi kusvikira zvino ndiri kuisa debian mumakomputa manomwe ega kune avo vashandi kuti vadzidze uye kujairira kushandisa pamba, vanowana kudzidziswa pabasa chairo. Handizive kana chinhu chimwe chete ichi chakaitika kune dzimwe nzvimbo dzenyika, asi atove mamwe makambani nemamwe masangano (senge dzimbahwe reNational Institute of Cultira muChiclayo) vari kufunga zvakanyanya nezve kutama kubva ku / & (% dows XP kuLinux.
Kuwedzera chimwe chinhu, kana iri hurumende yepakati, sezvo software yemahara isina kutaurwa, kana mukongiresi kana chero chinhu, masangano ehurumende ari ega achitama kubva kuhurongwa hwekushandisa maringe nemitemo yavanoshandisa kumatunhu avo.
Ini ndinofunga kuti muguta randinogara maive nerombo rakanaka, asi ipapo, ndinoziva kuti neizvi masangano achatanga kukurudzira zvakawanda kuchinja.
Zvakadii necyber café neLinux?
Elive Gem: GNU / Linux yakagadzira hunyanzvi